စက်တင်ဘာလ 2014 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » စက်တင်ဘာလ
VariCam 35: တစ်ဦးကဒုတိယအမျှော်
အဆိုပါ VariCam 35 Panasonic ကအသစ် 4K ကင်မရာ / အသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လုယူသောသူသတိပေးချက် - ပထမအရိပ်အမြွက် NAB 2012 မှာထငျရှားလေ! ဒီထုတ်ကုန်ဟာပုံဆွဲဘုတ်အဖွဲ့-ချွတ်ခုန်တက်ခဲ့ပြီးရောနှောထုတ်လုပ်သူများနှင့် cameramen ကြောင့်ပြီးနောက် lusting ခဲ့သည်! ချိုမြိန်ရှာဖွေနေသင့်ရဲ့ High-end ဘဏ်ဍာကိုစောင့်ရှောက်ကိုကူညီပါ။ သေး Plateau ကြောင်းတိတ်ဆိတ်ရောက်ရှိပြီမဟုတ်လော ထိုအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပထမဆုံးအတန်းအစားသူတို့ rarified ထွဋ်ရောက်ရှိဖို့တစ်ဦးခြေထောက်-အရှုံးမပေး ...
အဆိုပါ HPA တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအင်ဂျင်နီယာ Excellence Awards ဆုပေးပွဲနှင့် HPA တရားသူကြီးမှတ်စာဆုကို၏ 2014 Winners ကြေညာ
အင်ဂျင်နီယာ Excellence, ASC-CDL, တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု DigitalFilm သစ်ပင်နဲ့ရောဂုဏ်ထူး (Los Angeles မြို့,, CA) အတွက် MACOM, NVIDIA, Wohler / Cinnafilm - ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (r) ကိုအဖှဲ့အစညျး၏ 2014 အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုနှင့် HPA ၏လက်ခံသူများကြေညာလိုက်ပါတယ် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုအတွက်တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတရားသူကြီးမှတ်စာဆုချီးမြှင့်။ ဤရွေ့ကားဆုအစဉ်မပြတ်မောင်းသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထူးချွန်နှင့်ဖန်တီးမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့တီထွင်ခဲ့ကြသည် ...
Dallas, TX, စကျတငျဘာ 30, 2014 - Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ (PWS), တစ်ဦး Masque အသံကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကြိုးမဲ့စနစ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအပါအဝင်, WFX 2014 (Booth 1023) မှာ RF ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏အကွာအဝေးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ယင်း၏ Helical antenna နှင့်အမိုးခုံး Helical antenna, Intermodulation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆော့ဝဲစနစ် (ို့နှငျ့ဆကျ), ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ကုမ္ပဏီမှ GX စီးရီးများနှင့် DB စီးရီး ...
DGWB ရဲ့ပါးနဇာတ်ဆောင်, ဂီတ-မောင်းနှင်စက်အပြောက်အနောက်တိုင်းကမ်းခြေရုပ်ရှင်များ, ဟောလိဝုဒ်ဂီတနှင့်ပိုပြီး parody! လင်းဒေးလ် Calif. -ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့နောက်ကျောစားသောက်ဆိုင်ကွင်းဆက်တစ်ခုအသစ်ကာတွန်းကြော်ငြာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် '' 60s မှ Wienerschnitzel ကြာပါသည်။ Orange County, ကယ်လီဖိုးနီးယားအေဂျင်စီ DGWB အားဖြင့်ပဋိသန္ဓေ ယူ. , အကြော်ငြာ Wienerschnitzel ရဲ့ 1961 ဇစ်မြစ်ကျလာသောမှ retro ကာတွန်းနှင့် jingles ကိုအသုံးပြုပါ။ တဦးတည်းအစက်အပြောက်ပူပြင်းတဲ့အဖြစ်စပျစ်သီးကိုတီဗီဥရောပ spoofs ...
Dalet Dalet AmberFin Transcoding ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပီပီ / AMWA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရယူနိုင်သောဖို့ပထမဦးစွာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အ software ကို-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးကြောင်းကြေညာခဲ့သည် - စက်တင်ဘာလ 2014, 11 - စက်ရုံ-ကျယ်ပြန့် BT အားကစား၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖြန့်ကျက် AS-30 ဖိုင်-based လုပ်ငန်းအသွားအလာပဲရစ်, ပြင်သစ်များအတွက် IBC2014 မှာ Dalet ဂုဏ်ပြု စက်တင်ဘာလ 13, 2014 ပေါ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန် (AmberFin ပလက်ဖောင်းရှိသည်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအကြားခဲ့ပါတယ် ...